Jumlada iPhone 12 taxanaha 2.5D asturnaanta ilaaliyaha shaashadda muraayadda soosaaraha iyo alaab-qeybiye | OTAO
Qof walba khibraddan ayuu soo maray. Markii aan adeegsaneyno taleefanka gacanta si aan lacag u bixinno, waxaan ka baqeynaa in kuwa kale ay arkaan lambarka sirta ah ama ay baaraan lambarkaaga QR si ay lacagtaada u xadaan. Tareenka xawaaraha sare, tareenka dhulka hoostiisa mara, ama wiishka, furitaanka dukumiintiyada ganacsiga sidoo kale waxay ka baqayaan in la qabto.
Si looga hortago kuwa kale inay arkaan nuxurka moobiilkeena. OTAO waxay soo saartay ilaaliyaha shaashadda muraayadda khaaska ah ee qarsoodiga ah ee 2014 kaas oo sidoo kale loogu yeeray anti-basaas ama ilaaliyaha shaashadda muraayadda ka hortagga peep ..
Mabda'a filimka asturnaanta
Filimka gaarka ah wuxuu ku darayaa shaandhada asturnaanta filimka caadiga ah, adoo adeegsanaya Micro-louver teknolojiyadda indhaha, xakamee xagasha nalka, sidaas darteed xagasha daawashada ee shaashadda taleefanka gacanta ayaa cariiri ah. Sidan oo kale, kuwa kale waa inay ahaadaan isla xagalka hore ee aad u arki karto waxa ku jira shaashadda taleefanka si cad, kuwa ka baxsan meelaha la arki karo oo keliya ayaa arki kara shaashad madow.
Waa inaad iska ilaalisaa Filimada Asturnaanta Fake
Waxa kale oo suuqa ku jira filim qarsoodi ah oo qarsoodi ah oo isticmaala kala qaybsanaan wax halkii Micro-louver indhaha wax. So taas waad awoodaa’u arag shaashadda si cad xagga hore dhinac,maxaa yeelay waxay ka celisaa iftiinka intiisa badan malag kasta.
OTAO NOOCA SHARCIYADA GARAADKA
Hadda suuqa waxaa ku qulqulaya aflaam kala duwan oo tayo sare leh oo ka soo horjeedka peep peep, sidee u dooran karnaa filim tayo sarre leh?
Waxaad isbarbar dhigi kartaa thoog dhinacyada:
● Asturnaanta xagal ；
● Gudbinta ；
Saamaynta anti-peeping waxay la xiriirtaa xagasha daawashada. Yaraanta xagasha muuqaalka, ayaa sifiican u saameynta anti-peeping. Muuqaalka xagasha ah ee filimka anti-peep-ka wuxuu ku saabsan yahay 30 ° -45 °, saameynta anti-peep-ka ayaa ah mid aad u liidata, halka filimka OTAO iPhone anti-peep uu leeyahay xagal daawasho ah 28 °, kaas oo ilaalin kara asturnaanta shaqsiyeed fiican.
Anaga sidoo kale waxay u baahan yihiin inay sharxaan halkan. Waxaa jira magacyo kala duwan oo loogu talagalay filimada asturnaanta suuqa, qaar waxaa loogu yeeraa 180 ° filimada asturnaanta (sidoo kale loo yaqaan2 jid filimada asturnaanta, ee ka hor istaagi kara dadka bidixda iyo midigta inay wax ka eegaan moobilkooda), 360 ° asturnaanta filim (sidoo kale loo yaqaan 4 habka gaarka ah filim, taasi waa, dadku waxay kufiiri karaan asturnaanta taleefannadooda gacanta afar xagallo, kor, hoos, bidix, iyo midig). Marka 180 ° iyo 360 ° waa ka duwan fikradda ah asturnaanta xagal.
Sida gudbinta iftiinka, waxay si toos ah u saameyn doontaa raaxada daawashada shaashadda, markaa tani sidoo kale waa ka muhiimsan tahay.
Si loo kaydiyo kharashaadka, warshado badan ayaa isticmaali doona qalabka liita ee ka hortagga, ma aha oo kaliya xagasha ka hortagga qulqulka waa mid aad u ballaaran, laakiin gudbinta iftiinka sidoo kale waa mid aad u hooseeya, laga yaabee kaliya 40% -50%, dadka isticmaalana waxay dareemi doonaan raaxo la'aan ka dib daawashada shaashadda dhowr daqiiqo.
Filimka asturnaanta ee OTAO wuxuu adeegsadaa jiil cusub oo OCA substrate koollo indhaha ah si uu shaashadda u caddeeyo oo u caddeeyo, gudbinta iftiinka ayaa gaari karta in ka badan 60%. Waxay sidoo kale si wax ku ool ah uga hortagi kartaa dhalaalka oo waxay kaa dhigeysaa mid raaxo leh markaad isticmaaleyso taleefankaaga gacanta.
Xiga: 360 Isugeynta Ilaalinta Jirka oo buuxda iPhone 12
● Telefoonka 12 Mini
IPhone 12 ；
IPhone 12 Pro ；
IPhone 12 Pro Max ；
IPhone 11 ；
11 iPhone 11 Pro Max ；
iPhone 12 taxane 2.5D muraayad dabacsan oo buuxa ...
Samsung S21 2.5D Full Cover qaboojiyay Glass Scre ...
Samsung S21 2.5D Glue Muusiga Muraayada Glass Scree ...